Global Voices teny Malagasy · 18 Jolay 2010
18 Jolay 2010
Janoary 2022 42 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 18 Jolay 2010
Afrika Atsimo : 67 minitram-piovana – Andro ho an'i Mandela
Afrika Atsimo 18 Jolay 2010
Nelson Mandela Loharano:www.ambassadors.net Maro amin'ny olona no mahalala fa 27 ny isan'ny taona lanin'i Nelson Mandela tany am-ponjan'ny Nosy Robben any Afrika Atsimo. Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona momba an'i Madiba (fiantso ahafantaran'ny olona azy am-pitiavana any Afrika Atsimo) kosa dia ny 67 taona laniny nanoherany ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny...
Sina: Famelezana ireo blaogy bitika
Shina 18 Jolay 2010
Araka ny vaovaon'ny Apple Daily androany, nandray fepetra hentitra amin'ny fanaraha-maso ny fiasan'ireo fitorahana blaogy fohy kely rehetra ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny serasera sy ny fampahalalam-baovao. Hatramin'ny nahavoasakana ny Twitter sy ny Facebook tany Sina no niroboroboan'ny valan-tserasera isan-karazany. Maro amin'ireo vavahadin'ireo vohikala, tahaka ny Sina, Sohu, 163.com ary Tencent,...
Togo: Manararaotra ny fivoaran'ny teknolojia ireo vehivavy sy ireo tanora
Afrika Mainty 18 Jolay 2010
Tamin'ny faha-17 Jona, nisokatra tany Ouagadougou, Burkina-Faso[fr] nyfihaonam-be panafrikana fahatelo mikasika ny fomba fampiasa tsara indrindra ny ICT [TIC amin'ny teny Frantsay; Teknolojian'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisana] any amin'ny tany miteny frantsay ao Afrika . Raha miompana kokoa amin'ireo ftetika hifehezana ny heloka bevava anaty Aterineto ny fihaonam-be, ireo tontolon'ny blaogy Togolezy kosa dia manararaotra sy miresaka ny tanjaky ny teknolojian'ny fampitam-baovao ho amin'ny fampandrosoana, indrindra fa ny vehivavy sy ny tanora